ကိုဗစ်-၁၉ကာလ အိမ်တွင်းအောင်းနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို ရယ်မောမဆုံးဖြစ်စေမယ့် အရိုင်း ရဲ့ ဟာသလေး(ရုပ်သံ) – Zartiman
Zarti Man | May 10, 2020 | Celebrity | No Comments
အားလုံး ဘေးဘယာကပ်ဆိုးကြီးမှ ကင်းဝေကြပါစေ။ မကြာမီ ပြန်ဆုံကြမည်” Tag လို့မရလို တချို့ မtag ရပါ။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန် ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ အရိုင်းကတော့ ချစ်ခင် ရတဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေလည်း ပျော်ရွှင်စေဖို့ရည် ရွယ်ပြီး တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ်နော် ပရိသတ်ကြီး. ။ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း အရိုင်းရဲ့ ဟာသသီချင်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော်..။
မေလ (၈)ရက်နေ့မှာ တော့ အရိုင်းက အိမ်မှာနေတဲ့ အချိန် အနုပညာမောင်နှမ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်များ နဲ့ မတွေ့ရလို အပျင်းပြေလေး သီဆို ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ လက်တန်း သီချင်း ဗီဒီယိုဖိုင် လေး ကို “ဒါလေးကို နားထောင်ကြည့်ပေး ပါလို့။အခုလို ကာလမှာ လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်များကို သတိလည်းရ ပရိသတ်တွေ fri တွေ အတွက်လည်း ခဏလောက်ပျော်ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ သီချင်းအဟောင်းလေးကို တီးခတ် ရေးစပ်သူက………ဂီတမှူးမြတ်မင်းက ကြံစည်ရေးသားပါတယ်။
ကျွန်တော် အရိုင်းက လုပ်ကြံသီဆိုပါတယ်။( ကိုယ်ကလည်းသိပ်မဆိုချင်ပါဘူး။ တန်းပြောတန်းဆို လိုက်တာပါ) ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် အရိုင်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် နော်.။ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ကာ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေသူ ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ အရိုင်းဟာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်သ လို အပြင်မှာလည်း စနောက်ကာ ပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူပါ.။
Source: Aung Than Oo’s Facebook
ကိုဗဈ-၁၉ကာလ အိမျတှငျးအောငျးနတေဲ့ ပရိသတျတှေ ကို ရယျမောမဆုံးဖွဈစမေယျ့ အရိုငျး ရဲ့ ဟာသလေး(ရုပျသံ)
အားလုံး ဘေးဘယာကပျဆိုးကွီးမှ ကငျးဝကွေပါစေ။ မကွာမီ ပွနျဆုံကွမညျ” Tag လို့မရလို တခြို့ မtag ရပါ။” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျ ရကျ စာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ အရိုငျးကတော့ ခဈြခငျ ရတဲ့ အနုပညာမောငျနှမတှနေဲ့အတူ ပရိသတျတှလေညျး ပြျောရှငျစဖေို့ရညျ ရှယျပွီး တငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါ တယျနျော ပရိသတျကွီး. ။ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး အရိုငျးရဲ့ ဟာသသီခငျြး ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျနျော..။
မလေ (၈)ရကျနမှေ့ာ တော့ အရိုငျးက အိမျမှာနတေဲ့ အခြိနျ အနုပညာမောငျနှမ လုပျဖျော ကိုငျဖကျမြား နဲ့ မတှရေ့လို အပငျြးပွလေေး သီဆို ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ လကျတနျး သီခငျြး ဗီဒီယိုဖိုငျ လေး ကို “ဒါလေးကို နားထောငျကွညျ့ပေး ပါလို့။အခုလို ကာလမှာ လုပျဖျောကိုငျ ဖကျမြားကို သတိလညျးရ ပရိသတျတှေ fri တှေ အတှကျလညျး ခဏလောကျပြျောရအောငျ တငျပေးလိုကျတာပါ။ သီခငျြးအဟောငျးလေးကို တီးခတျ ရေးစပျသူက………ဂီတမှူးမွတျမငျးက ကွံစညျရေးသားပါတယျ။
ကြှနျတျော အရိုငျးက လုပျကွံသီဆိုပါတယျ။( ကိုယျကလညျးသိပျမဆိုခငျြပါဘူး။ တနျးပွောတနျးဆို လိုကျတာပါ) ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျ နိုငျတဲ့ ဟာသ သရုပျဆောငျ အရိုငျးကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ နျော.။ ဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျကာ ခဈြမွတျနိုးတဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျရငျး ပြျောရှငျအေးခမျြးစှာ ဘဝကို ဖွတျသနျးနသေူ ပဲဖွဈပါတယျ.။ အရိုငျးဟာ ရုပျရှငျထဲမှာ ပြျောပြျောနတေတျသ လို အပွငျမှာလညျး စနောကျကာ ပြျောရှငျနတေတျတဲ့သူပါ.။
ချစ်ရ မှာကြောက်လို့ အပျိုကြီး လုပ်သင့်/မလုပ်သင့် မေပန်းချီက သူ၏ပရိသတ်ကြီးကို အကြံတောင်း
ကပ်ရောဂါကြီးပြီးဆုံးလို့ အခြေအနေတွေကောင်း သွားရင် နှစ်(၃၀) ပြည့်ပွဲကြီးမှာ ဆုံကြမယ် ဆိုတဲ့ (IC)အဖွဲ့ကြီး
ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို ရဲ့ “သင့်အတွက် မနက်ဖြန်” သီချင်း MTV